Jodaisma rabinika - Wikipedia
Ny jodaisma rabinika dia endriky ny jodaisma nipoitra avy amin'ny jodaisma farisiana taorian'ny faharavan'ny Tempolin'i Jerosalema tamin'ny taona 70 taor. J.K. Tamin'ny taonjato faha-2 hatramin'ny faha-6, izay fotoana nanombohana nandray azy ho endrika filamatry ny jodaisma, no niforonan'ny firafetany.
Ny jodaisma karaita ihany, izay misy mpikambana vitsy, no tsy manaiky ny fivoasana ataon'ny raby, satria tany aloha dia tsy eken'ny Samaritana izay rehetra tsy voasoratra ao amin'ny boky dimy ao amin'ny Torah.
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe יהדות רבנית / Yahadut Rabbanit ny jodaisma rabinika.
1 Ny fototry ny fampianaram-pinoan'ny jodaisma rabinika
2 Ny sampan'ny jodaisma rabinika
2.1 Ny jodaisma nohavaozina
2.2 Ny jodaisma mpitahiry
2.3 Ny jodaisma ortodoksa
Ny fototry ny fampianaram-pinoan'ny jodaisma rabinikaHanova
Araka ny fampianaran'ny jodaisma rabinika dia ny andalana ao amin'ny Bokin'ny Eksodosy (na Eksaody) izay atao amin'ny teny hebreo hoe שְׁמוֹת / Shemot (Eks. 24:12) dia midika fa misy Lalàna roa nomena miaraka tao amin'ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia), dia ny Torah izay Lalàna voasoratra (hebreo: תורה שבכתב‎ / Torah she-bi-khtav) sy ny Mishna izay Lalàna am-bava (hebreo: תורה שבעל פה/ Torah she-be'al peh).
Izao ilay andalan-tsoratra:
"Ary hoy IHVH tamin'i Mosesy: Miakara eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto, dia homeko anao ny vato fisaka izay misy ny Torah sy ny Mitsva, izay nosoratako hampianarina azy." (Eks. 24:12). Ao amin'ny Baiboly malagasy dia adika hoe "lalàna" ny hoe Torah fa "didy" kosa ny hoe Mitsva.
Ireo Lalàna roa ireo dia nambara tamin'ireo Zanak'i Israely nanatrika sady nampitaina am-bava hatramin'izay ka hatramlin'ny vanimpotoan'ny Tempoly Faharoa tao Jerosalema.
Tamin'ny faharavan'ny tempoly tamin'ny taona 70 taor. J.K., indrindra taorian'ny nahafatesan'ireo Olon-kendrin'izany fotoana izany (ny Raby Akiva no nalaza indrindra tamin'izy ireo) dia nisy ny fanapahan-kevitra handraikitra ho fehezan-dalàna ao amin'ny Mishna (fehezan-dalàna am-bava jiosy voalohany sady literatiora rabinika voalohany koa) ny Torah am-bava. Avy tamin'io Mishna io no nanoratana ny Tosefta (fanampin'ny Mishna) sy ny Gemara (fivoasana ny Mishna izay mampifandray azy mazava amin'ny Tanakh amin'ny fomba mazava kokoa).
Tamin'ny taonjato faha-5 sy faha-6 dia nampandrina an-tsoratra ny endrika roan'ny Talmud (lahatsoratra mamondrona ny adihevitr'ireo raby momba ny lohahevitra isan-karazany ao amin'ny Lalàna jiosy), dia ny Talmudn'i Jerosalema sy ny Talmudn'i Babilona, izay nampiravina ny Mishna sy ny Gemara ary ireo soratra ivoasana azy ireo.
Farany, tamin'ireo taonjato manaraka dia nisy literatiora rabinika nosoratana manodidina ny Talmud izay ahitana famoaboasana, fanontaniana arahim-baliny, sns. Izany rehetra izany no fototra iorenan'ny fampianaram-pinoan'ny jodaisma rabinika.
Amin'ny jodaisma rabinika, ny hevitry ny Torah voasoratra dia tsy ho azo raha tsy eo ny Torah am-bava. Izany, ohatra, no mety hitranga amin'ny famakiana ny andalana ao amin'ny Lalàna jiosy manao hoe: "Hovonoinao araka ny fitsipika nandidiako anao ny biby" dia tsy hita ao amn'ny Tanakh fa ao amin'ny Talmudn'i Babilona).
Ny Halakha (fitambaran'ny fitsipika sy ny fomba amam-panao fehezin'ny Lalàna jiosy) ao amin'ny jodaisma rabinika dia miorina indrindraindrindra amin'ny Torah voasoratra nefa koa amin'ny Torah am-bava sy amin'ireo famelanelarana an'ity Torah an-tsoratra ity.
Ny sampan'ny jodaisma rabinikaHanova
Ny jodaisma rabinika no be mpanaraka indrindra ao amin'ny jodaisma, hany ka raha miresaka ny amin'ny jodaisma dia izy no tonga ao an-tsain'ny maro voalohany ka lasa ampitovizina aminy. Tsy ranoray tanteraka anefa ny jodaisma rabinika fa misy sampam-pirehana telo lehibe izay samy manana ny fivoasany ny fomban'ny fanambaran-tenan'Andriamanitra, ny fahazoany ny maha zava-dehibe ny fanapahan-kevitry ny raby, eny fa na ny famaritana ny atao hoe "jodaisma rabinika" aza. Ireto avy izy ireo: ny jodaisma nohavaozina sy ny jodaisma mpitahiry ary ny jodaisma ortodoksa.
Ny jodaisma nohavaozina dia sampan'ny jodaisma rabinika izay niseho tao Alemaina tamin'ny taonjaton'ny Fahazavana, tao amin'ny fihetsiketsehan'ny Haskala notarihin'i Moses Mendelssohn. Maro ireo firehana nipoitra tamin'izany izay namporisika ny Jiosy handray ny fandrosoana amin'izao andro ankehitriny izao sady hifanerasera amin'ny fiarahamonina ivelan'ny an'ny Jiosy. Indraindray koa ny jodaisma nohavaozina dia atao hoe jodaisma liberaly na jodaisma progresista.
Ny jodaisma mpitahiry, izay atao hoe koa Masorti, dia firehan'ny jodaisma rabinika izay mandray ny fotokevitry ny fanavaozana nefa tsy mandray izany ho lasan-davitra loatra na lalina loatra. Ny fihetsiketsehana masorti dia mitonon-tena ho firehana afovoany izay manome lanja ny fahefan'ny Talmud nefa manaraka ny fitsipika amin'ny fomba tsy hentitra loatra sady tsy mila fanajana amin'ny pitsopitsony ireo fanapahan-kevitra tany aloha, ka izany no mahatonga ireo rabiny halalaka kokoa amin'ny fivoasany ny Halaka. Ao Etazonia sy ao Kanada no tena ahitana ny jodaisma mpitahiry.
Ny jodaisma ortodoksaHanova
Ny jodaisma ortodoksa dia firehan'ny jodaisma rabinika izay mihevi-tena ho hany mandray tokoa ny finoana sy ny fanaon'ny Jiosy mandala ny Lalàna voasoratra sy ny Lalàna am-bava nampitain'i Mosesy teo amin'ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia), miaraka amin'ny fivoasana ireo lalàna ireo. Heverin'ny Jiosy ortodoksa ho mihataka amin'ny lala-marina ny Jiosy hafa rehetra izay ataony ho manao fampianaran-diso. Ny teny hoe "ortodoksa" dia napetak'ireo Jiosy manaraka ny jodaisma nohavaozina ka misy ny manaiky an'izany ary misy ny tsy tia an'izany fa misafidy ny teny hoe Haredi.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jodaisma_rabinika&oldid=972971"
Dernière modification le 6 Aogositra 2019, à 10:26
Voaova farany tamin'ny 6 Aogositra 2019 amin'ny 10:26 ity pejy ity.